Kusho "Limfomiozot" (ukubunjwa okuyindawo ehlanganisa izingxenye isitshalo) kufakwe inombolo ochungechungeni gomotoksicheskogo imikhiqizo. Umuthi has immunomodulatory, anti-edema, ngokukhishwa kobuthi egazini, amanzi lymph, umphumela anti-inflammatory. Nge kwema- izidakamizwa emzimbeni, ukuze kuvuswe usimamise izinqubo umzimba, kuthuthukisa amanzi lymph kwezicubu, sithuthukisa isithiyo umsebenzi e-lymph. I nomuthi sijulisa ukuqedwa kwemikhiqizo amagesi anobuthi avela emkhathini intercellular. Lokhu-ke kuholela ekusebenzeni ngcono phakathi emangqamuzaneni izinhlelo sezinzwa, amasosha omzimba bese endocrine. Ngokwesibonelo, okwandisa amanzi lymph sithuthukisa imithombo emathunjini okuvikela ulwelwesi emathunjini. izinguquko ezifanayo babonakala cishe zonke nolwelwesi omzimba lwamafinyila. Ukusebenzisa izidakamizwa kwandisa izinga Ukungena nezinye izidakamizwa. Lokhu kwenza kube nokwenzeka ukunciphisa umthamo kanye enqabayo ukusabela neminye imithi.
Izidakamizwa "Limfomiozot". Imiyalelo: Ubufakazi
Umuthi Kunconywa izidakamizwa ukudakwa limfatiko-hypoplastic, catarrhal diathesis exudative, pathologies ezihilela immunocompromised. Ngo sikashukela ukuthuthukiswa polyneuropathy, edema perineural, dysbiosis esabelwa futhi izidakamizwa "Limfomiozot". Adenoids, zokugula ingozi nesibulalayo, Izilonda (dermatitis endogenous, dermatitis atopic, eczema) zifakwe ohlwini izinkomba ngokuba izidakamizwa. Imithi Kunconywa limfatizme, kuhlanganise elephantiasis. Akunikeze imithi njengoba isinyathelo ekwelapheni pathologies we nasopharynx, asthenia, retardation engqondo, iziyaluyalu ngokomzimba ubuntu.
Izidakamizwa "Limfomiozot". Imiyalelo: Izimo, side effects
Against isizinda ukusetshenziswa kwezidakamizwa cishe ukwandisa ukukhuthazwa ukukhiqizwa kwama-hormone egilo. Ngokuqondene nalokhu imithi engabelwe-hyperthyroidism, i-hyperthyroidism. Izimo zihlanganisa hypersensitivity kuya izingxenye. Phakathi nokukhulelwa kanye lactation izidakamizwa ovunyelwe ingasetshenziswa kuphela izincomo kadokotela. Ngo umkhuba emtholampilo angabhalisiwe futhi abachazwa ukusabela ezingezinhle emuthini.
"Limfomiozot" lisho ukuthini. Yokusetshenziswa
Umuthi ngendlela amaphilisi ngaphansi kolimi noma ngomlomo Kunconywa ngaphambi kokudla for isigamu sehora. Ivunyelwe ukuncibilikisa izidakamizwa emanzini. Umthamo izingane Kumiswa onguchwepheshe. Inani esiqokiwe zomuthi kungabuye buhlanjululwe in ingilazi yamanzi futhi uthathe usuku lonke e sips amancane. Lolu ketshezi kufanele kube emfushane ukubambezeleka kwesikhathi emlonyeni. Umjovo esiwabelwe ampoule ngosuku. Kumelwe ukusebenzise kanye noma kabili ngesonto. Lapho Yiqiniso okukhulu isifo Uchwepheshe angase atuse ngoba ampoule nsuku zonke.
"Limfomiozot" lisho ukuthini. Ukufundiswa: imiyalelo ezikhethekile
Ubude besikhathi sokwelashwa gomotoksicheskogo uqoka uchwepheshe ngamunye. Isikimu isicelo kuncike ukubonakaliswa yomtholampilo, kobukhulu nenkambo isifo.
Lapho kubalulekile ukuba uthathe emetics? Incazelo amalungiselelo
Dominican Republic. Climate futhi isikhathi esingcono ezokungcebeleka ezokuvakasha
Kumasathalayithi ka Pluto: ohlwini. Yiziphi iziphuphutheki ka Pluto?
Indlela yenza ngendlela thermos rose okhalweni - indlela ukulungiselela isiphuzo ewusizo
Umshini Tattoo ngezandla aphume edayisa izinto
Njengoba ikhompyutha usike ingoma? Amathiphu abathandi bomculo